Fallanqeyn sharci ah: Muxuu ka dhigan yahay go’aanka Maxkamadda Caddaaladda? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Fallanqeyn sharci ah: Muxuu ka dhigan yahay go’aanka Maxkamadda Caddaaladda?
Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ayaa go’aankii la sugayey ee dacwadda Xadaynta Xuduudka Badda Soomaaliya iyo Keenya soo saartay . Soomaaliya ayaa 2014kii waxa ay maxkamadda u gudbisay dacwad ay ku codsanayso in la calaammadeeyo xad badeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Keenya illaa dhul badeedka ka dambeeya qalfoof badeedka.
2. Dooddii Keenya oo ahayd xudduud badeedka labada dal u dhexeeya waa xadaysan yahay oo heshiis ayaa lagu yahay isaga oo ku salaysan xarriiqa ku dherersan xadka (parallel of latitude). Waxa ay Keenya sheegtay in ay 1979kii iyo 2005tii sheegteen xadkooda, Soomaaliyana ayna ka hor imaan oo aamusnaan ku aqbashay. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in Xeerka Biyaha Badda ee Keenya oo soo baxay 1972dii iyo Xeerka Qaybaha Badda oo 1989kii oo Keenya oo soo baxay ay ka hor imaanayaan sheegashadaas. Sidoo kale sharciyo Soomaaliya soo saartay 1988 iyo 1989 ayaa diidaya doodda Keenya oo ah Somaaliya way aqbashay cabirka Keenya.Tan kale, gudbintii codsigii kordhinta qalfoof badeedka oo ka dambeeya 200 bayl badeed ee Soomaaliya iyo Keenya gudbiyeen 2009kii ayaa taas ka hor imaanaya. Waxa kale oo maxkamaddu sheegtay in Heshiiskii Isafgaradka ahaa ee Soomaaliya iyo Keenya galeen uu sheegashadaas ka hor imaanayo isaga oo qorayey in aan xuduudku calaamadaysayn oo labada dal ka heshiin doonaan. Maxkamaddu waa diidday doodda Keenya oo waxa ay sheegtay in ayna Soomaaliya si cad oo joogto ah u aqbalin xuduudkaas Keenya sheegatay, xad badeedka labada dal u dhexeeyana uuna xadaysnayn.https://21f9dc745265b6ac021741ce1e12073e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Fallanqeyn sharci ah: Muxuu ka dhigan yahay go’aanka Maxkamadda Caddaaladda? was last modified: October 13th, 2021 by Admin
Dowladda Soomaaliya oo ka tacsiyadeysay qaraxyadii ka dhacay Beirut
Ururka Daalibaan oo maanta ku dhawaaqaya dhismaha dowlad cusub
QM oo dowladda Soomaaliya ka codsatay in dib loo celiyo sharciga dambiyada Galmada
Baydhabo oo ay soo gaartay wafuud ka kala socota Dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qayb ka ah jamhuuryadda Federaalka Soomaaliya.
Dab baaxadleh oo burbur u geystay gobalada Washington, Oregon iyo California.
Madaxwynaha dalka Ivory Coast oo mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaa